Muuri News Network » Muxuu Tababare Zinedine Zidane Ka Yiri Kulankii Xalayto Kooxdiisa Real Madrid Looga Jabiyay Rikoorka Guuldarro La’aanta?
Muxuu Tababare Zinedine Zidane Ka Yiri Kulankii Xalayto Kooxdiisa Real Madrid Looga Jabiyay Rikoorka Guuldarro La’aanta?
Ka dib markii uu arkay ciyaartoydiisa oo ogolaaday in labo gool laga dhaliyo 10kii daqiiqo ee ugu danbeysay ciyaarta, tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa qirtay in si ku meel gaar ah oo ay ciyaartoydiisa diirada uga qaadeen ciyaarta inay keentay in laga badiyo xalayto.
Los Blancos ayaa u muuqatay kuwa sii dheereysanaya rikoorkooda guuldarro la’aanta ka dib markii uu Cristiano Ronaldo dhaliyay gool rigoore ah, laakiin gool uu iska dhaliyay Sergio Ramos iyo gool uu dhamaadkii ciyaarta dhaliyay Stevan Jovetic ayaa Sevilla ka saaciday inay 2-1 ku badiso.
Natiijadaas waxa ay la micno tahay in kooxda Jorge Sampaoli ee Sevilla inay soo galeen kaalinta labaad ee La Liga, halka Real ay hal dhibic ku hogaamineyso horyaalka inkastoo uu kulan u harsan yahay.
“Waxaan isdhiganay muddo shan daqiiqo ah, intaas ayaana inoogu filneyd inay guusha inaga baxsato” ayuu tababare Zidane u sheegay suxufiyiinta ka dib ciyaartii Sanchez Pizjuan.
“Waa natiijo ay adag tahay in la aqbalo marka loo eego sida ay ciyaarta ku socotay, laakiin kubada cagta ayaa sidaas ah, waana inaan aqbalno natiijada. Waxaan guuldaradaan u isticmaali doonaa inaan isku dhiirogelino kulankeena soo socda.”
Tababaraha reer France ayaa su’aal laga weydiiyay go’aankii uu kooxdiisa ku ciyaarsiiyay shax ciyaareedka 3-5-2 oo seddex daafac danbe ah.
“Shaqsi ahaanteyda, waxaan qabaa inaan si wacan ugu ciyaarnay seddexda daafac danbe, aad ayaana ugu maqsuudsanahay sida adag ee ay ciyaartoyda kale u shaqeeyeen.” ayuu yiri.
“Si hagaagsan ayaan u maareynay ciyaarta 85 daqiiqadood, laakiin waxaan kaliya diirada ka qaadnay ciyaarta shan daqiiqo.”
Guuldarada waxa ay la micno tahay in rikoorkii guuldarro la’aanta ee Real Madrid inuusan dhaafi doonin 40 kulan, laakiin 44 jirkaan ayaa arintaan uga hadlay si falsafadeysan.
“Waa wax caqligal ah in rikoorka guuldarro la’aanta uu maalin uun soo dhamaan lahaa. Waxaan mar walba sheegayay in xilli ciyaareedkan uu adkaan doono ilaa iyo dhamaadka” ayuu yiri.
Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyay kabtan Sergio Ramos kaasoo bartamihii isbuucii horre gool rigoore ah guusha ugu saaciday Real Madrid balse kooxdiisa xalayto ku barbareeyay gool uu iska dhaliyay.
“Waan ku faanayaa kabtankeena. Waxa uu u ciyaaray si weyn, goolasha la iska dhaliyo waa ay ka dhacdaa kubada cagta. Waxa uu soo bandhigay shaqsiyad weyn” ayuu yiri tababaraha Faransiiska.
“Sevilla waxa ay soo bandhigtay inay dhab ka tahay u tartamida horyaalka La Liga. Anagase waan dhaawacanahay sababatoo ah guuldarro marnaba ma ahan wax fiican, laakiin waan qiimeyn doonaa qaab ciyaareedkeena, waana arki doonaa waxa u baahan in la hagaajiyo.”